Wararka - RPET Fabric (Recycled PET Fabric) waxaa sidoo kale loo yaqaannaa dharka cagaaran ee dhalada coke.
RPET Fabric (Recycled PET Fabric) waxaa sidoo kale loo yaqaannaa dharka cagaaran ee dhalada coke. Waa nooc cusub oo ah Cagaar cagaaran oo cagaaran oo ay soo saartay dib-u-warshadaynta dunta PET ee qaaliga ah. Kaarboonka asalkiisu hooseeyo wuxuu abuuray fikrad cusub oo ku saabsan dib-u-cusbooneysiinta.Sida ku cad xaqiijinta tijaabada, waxay badbaadin kartaa ku dhowaad 80% tamar marka la barbardhigo fiber-ka caadiga ah ee caano-cagaarka ah.
Nidaamka wax soo saarku wuxuu u qaybsan yahay lix tallaabo: Dib-u-warshadaynta dhalada khasnada ah → kormeer oo kala saar dhalooyinka khasnada ah → jarjar dhalada qaaliga ah → soosaarta xariir, qabow oo aruur xariir → dib-u-warshadaynta dunta 'PET'
Marka loo eego nooca dunta: dharka dunta, dharka laastikada, dharka daruuriga ah
Marka loo eego qaabka dharka: RPET dharka Oxford, RPET qolofka dharka xarkaha (astaanta), RPET filament fabric (logo), RPET maro maqaarka maro jilicsan, RPET faux suede fabric, RPET chiffon difaan, RPET midabka dharka butyl, RPET LiXin maro (non -woven), RPET maro tabinta ah (esd), RPET maro shiraac ah, RPET terylene dhar, RPET dhar, Roobka RPET dhar jacquard, RPET tolida dharka (dharka), RPET mesh maro (maro sandwich mesh, kuul iyo maro mesh, shimbir 's -eye maro), flannelette RPET (dhogorta dhogorta leh, jilicsan Farley, dhogorta maqaarka, maro laba gees leh, maro jilicsan oo PV ah, maro jilicsan oo jilicsan, maro jilicsan oo cudbi ah).
Shandado: bacda kumbuyuutarka, bacda barafka, kiishka, boorsada, kiiska taraleyga, kiiska safarka, bacda la isku qurxiyo, bacda qalinka, bacda kaamerada, bacda wax laga iibsado, boorsada gacanta, boorsada hadiyadaha, jeebka xirmo, gaariga caruurta, sanduuqa keydinta, sanduuqa keydinta, bacda daawada shandado iyo qalab kale;
Dharka guriga: sariirta afar-geesood ah, buste, dhabarka, barkinta tuur, tooyyo, maro qurxin leh, daboolka fadhiga, khafiifka, dalladda, koodhka roobka, qorraxda, daah, marada masaxaysa, iwm
Dharka: dharka hoos (qabow), dabaylaha, jaakada, jaakada jaakada, dharka isboortiga, surwaalka xeebta, bacda jiifka ee ilmaha, dharka dabbaasha, maro, dharka shaqada, dharka shaqada, dharka, jilitaanka dharka, dharka jiifka, iwm.;
Kuwa kale: teendhooyin, bacaha jiifka, koofiyadaha, kabaha, gawaarida gudaha, iwm.
Hal tan oo RPET yarn ah = 67,000 dhalo caag ah = 4.2 tan oo kaarboon laba ogsaydh badbaadiyey = 0.0364 tan oo saliid ah badbaadiyey = 6.2 tan oo biyo ah ayaa badbaadiyey Laakiin imminka, qayb yar oo keliya ayaa la adeegsadaa, inta kalena hadba sida loo doono loo tuuro, taasoo keentay oo ku luminaysa kheyraad iyo wasakheynta deegaanka. Sidaa darteed, tikniyoolajiyadeeda dib-u-warshadaynta waxay leedahay rajo ballaadhan.